Beel weynta Aadan-madoobe, sidii dagaalkii sokeeye ee qarnigii 19aad uu u kala qaxiyey, dib isku ma aanay soo haybsanin, oo dib isku ma aanay soo wada raadsanin. Nasiib darro, isma'na wada tirsato, oo beelo kale ayay ku kala dhex baahsan tahay; oo badhkeedna ay ku dhex milmeen.
Beesha inteeda istaqaanaa’ina, taariikhdeedii saxda ahayd way ilduuftey, oo aad iyo aad ayay u baal marsan tahay. Qaladkaas'ina muddo hore ayuu dhacey, oo dacaayado rakhiis ahaa, oo beesha lagu soo dhex daadiyey ayaa sababey. Isla tashwiishkaas ayaa nasiib darradan beesha u keeney, oo sii kala furfurey, oo midnimadeedii’na si xun u dhaawacey.
Runtu’se waxa ay tahay, beesha Aadan-madoobe waa wada Ugaadh Aadan-madoobe. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah, ayay dagaalkii sokeeye gashey. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah, ayay kala qaxdey. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah’na, wali way kala maqan tahay.
Beeshu kala qaxitaankeedii ka dib, waxa ay ku kala sugan tahay:
Waqooyi Bari Kiiniya
Iyo meelo kale oo geeska Afrika ka tirsan.
Beeshu kala jabkeedii ka dib, waxa ay u kala qeybsan tahay:
Habar Jecle dhex-yaal (Aadan-madoobe)
Badeed (Habar Jecle dhex-yaal)
Colow (Habar Jecle dhex-yaal)
Wacays (Ogaadeen dhex-yaal)
Muxumed (Warsangali dhex-yaal)
Ugaadhyahan dhex-yaal (Ugaadh Abokor)
Hadda’ba beesha waxa la gudboon, in aanay waxii horey u soo daashadey, ee kala qeybqeybiyey, ee kala qobqobey, ee kala fogeeyey, in aanay dib u sii eeganin; oo intaas in ka badan’na aanay sii huursanin.